Cumar Cabdirashiid oo ka digay dib u dhaca hareeyay doorashada dalka - Jowhar somali news leader
Cumar Cabdirashiid oo ka digay dib u dhaca hareeyay doorashada dalka
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ka digay dib u dhacyada hareeyay doorashooyinka dalka, iyadoo ilaa iyo haatan aysan cadeyn xiliga ay soo dhamaaneyso doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo mamaulada intooda badan aysan waxba ka qaban.
Mr. Sharmaake ayaa tilmaamay xagal-daacinta lagu hayo doorashada inay mustaqbalka saamayn ku yeelan karto dowladnimada dalka, isagoo dhinacyada ay quseyso arrintan ugu baaqay iney ka shaqeeyaan sidii doorasho cadaalad iyo deg deg leh dalka uga dhici leheyd.
“Haddii aad hesho cunto wasakhaysan, ma jirto wax faa’iido ah oo aad ka baarto, keliya waad tuuraysaa. Habka doorasho ee cudurka qaba ee gacanta lagu hayo ayaa laga yaabaa inuu sumeeyo nidaamka dowladnimo ee mustaqbalka.” Ayuu yiri Cumar Cabdirashiid.
Marxaladaha ku gadaaman doorashada sanadkan ayaa ka dhigaysa inay Somaliya wajaheyso doorashadii ugu adkeyd, tan iyo dib u yegleelidda dowladnimadeeda, muddo kow iyo labaatan sano laga jooggo.
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa tilmaamay in hannaan hufan oo doorasho lagu gaari karo in xilka si nabdoon loogu kala wareego.
“Bedelka hab maamuuska khaldan ee doorashada waxay noqon kartaa dariiqa keliya ee loo mari karo in si habsami leh oo nabdoon xilka loogu kala wareego.” Ayuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay.
Galmudug oo beri qabaneyso doorashada laba kamid ah kuraasta golaha shacabka.